HtaMaNae Competition – University of Computer Studies (Panglong)
On 2019 February 19, Full-moon day of Tapoedwe, University of Computer Studies (Panglong) held the HtaMaNae (sticky rice) competition. After the competition, the winners were awarded and the competition was successfully completed.
မြန်မာနိုင်ငံကွန်ပျူတာအသင်းချုပ် (MCF) နှင့် မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း (MPT) တို့ ပူးပေါင်းစီစဉ်သည့် “မြန်မာလူငယ် နည်းပညာစွန့်ဦးတီထွင် ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ၂၀၂၀” တွင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်မည့် အဖွဲ့များအနေဖြင့် ၂၀၂၀ ခုနစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၂၄) ရက် နေ့ နောက်ဆုံးထားပြီး လျှောက်လွှာများကို တင်သွင်းပေးရန် အသိပေးအကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။ ချီးမြှင့်မည့်ဆုများ 1. Technopreneurship 2020 Accelerate Award (10,000,000 MMK, Company Registration & Workspace for6Months) 2. Technopreneurship 2020 Startup Award (8,000,000 MMK, Company Registration & Workspace for6Months) 3. Technopreneurship 2020 Idea Award (3,000,000 MMK & Memorable Gifts) –2Awards 4. Technopreneurship 2020 Honorable Mention (800,000 MMK & Memorable Gifts) –6Awards